Others – Page 8 – Gentleman Magazine
သတင်းကောင်းနဲ့ သတင်းဆိုးရှိပါတယ်။ သတင်းဆိုးက ဓာတ်ဆီဈေးတက်ဖို့ ကာလ နီးနေပြီဆိုတာပါ။ သတင်းကောင်းကတော့ ဆီသုံးမှု ချွေတာပြီး ငွေကုန်ကြေးကျ လျော့စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ သင့်ယာဉ်ရဲ့ ဆီစားသုံးမှုကို လျော့ချပေးမယ့် နည်းလမ်း ၁၀ ခုကတော့ ၁. အရှိန်လျော့ပါ လူတော်တော်များများဟာ Highway ပေါ်မှာဆိုရင် သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက်
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ကုန်သည်တစ်ယောက်ဟာ ငွေချေးလုပ်ငန်းရှင်အဖိုးကြီး တစ်ယောက်ထံမှာ ငွေလိုလို့ ချေးရင်းနဲ့ အကြွေး အများကြီး တင်ပြီး ပြန်မဆပ်နိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ ငွေချေးပေးတဲ့ အဖိုးကြီးဟာ ကုန်သည်ရဲ့ သမီး အလှလေးရှိတာကို သိပြီး ကြိတ်သဘောကျနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူဟာ ကုန်သည်ကြီးနဲ့ ညှိနှိုင်းပါတယ်။ ကုန်သည်ကြီးရဲ့ သမီးနဲ့ ထိမ်းမြားခွင့်ရရင် အကြွေးအားလုံး
5 +5=5သင်ခန်းစာ
စဉ်းစားမိကြမှာပါ။ စာရေးသူဟာ ရူးများရူးနေသလား?? ၅ နဲ့ ၅ ပေါင်းတာ ၅ ရတယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မေးခွန်းလေးတစ်ခု မေးကြည့်ပါမယ်။ သင် သင့်အတွက်လကာလရှည် စီမံကိန်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်နှခေါက် ကြားဖူးပါသလဲ?? ပြီးတော့ အဲဒိစီမံကိန်းအောင်မြင်ဖို့ အဲဒိ ကာလရှည်တစ်ခုလုံး အာရုံစူးစိုက်ထားရမယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက် ကြားဖူးပါသလဲ။ ဒီစာထဲမှာ